Ungayiguqula njani imibala kwiFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | | ngokubanzi, Izixhobo zoYilo, Photoshop, Tutorials, Ezahlukeneyo
I-Adobe Photoshop ibonelela ngamawaka ezixhobo kunye nezenzo ezikhawulezayo, kangangokuba ngamanye amaxesha kuba nzima ukuzikhumbula okanye ukuzazi zonke. Kule tutorial sibuyekeza enye yezo zenzo zikhawulezayo: tyala imali. Ukuba ufuna ukwazi Ungayiguqula njani imibala yomfanekiso kwi-Photoshop okanye ungawenza njani umfanekiso ombi, sukuyeka ukufunda le post!
2 Ungayiguqula njani imibala kwi-Photoshop
3 Indlela emfutshane yebhodi yezitshixo yokuguqula imibala kwi-Photoshop
Vula umfanekiso kwi-Photoshop
Into yokuqala ekufuneka siyenzile vula umfanekiso esifuna ukusebenzisa kuwo olu tshintsho. Ndikhethe imbonakalo yomhlaba, ulwandle, kodwa ungakhetha ifoto oyithandayo. Khumbula ukuba unokuvula imifanekiso kwi-Photoshop ngokuyitsalela ngokuthe ngqo okanye, ukuba ukhetha, ngokuya kwimenyu ephambili, ifayile kwaye ucofe ukuvula. Kukho indlela emfutshane yekhibhodi, eyalela + okanye (kwiMac) okanye ulawulo + okanye (kwiWindows).
Nje ukuba uvule umfanekiso, Ungaguqula imibala yayo ngokuya kwimenyu ephezulu, kwithebhu yomfanekiso nakwimenyu ehlayo siza kucofa isenzo «ukuguqula». Ngokwenza eli nyathelo, uya kubona ukuba ifoto itshintsha ngokupheleleyo kwaye le "mfanekiso mhle" uyenziweyo.
Ukuba ujonga imibala uza kubona ukuba zichanekile, yintoni eyenziwa yiFotohop buyisela ipikseli nganye ngokuchaseneyo chromaticYiyo loo nto iiblues zijika zibe ziithoni zeorenji, iiorenji zijika zibe ziitoni eziluhlaza, kwaye umbala omhlophe ujike ube mnyama. Ndiphinde ndalwenza olo tshintsho komnye umfanekiso ukuze ubone ngokucacileyo. Ukuba xa umfanekiso ubuyiselwe umva sicinezela ukuyalela + mna kwakhona, imibala ibuyiselwe umva kwakhona kwaye ke sibuyela kwinguqulelo yoqobo.
Indlela emfutshane yebhodi yezitshixo yokuguqula imibala kwi-Photoshop
Los iindlela ezimfutshane zokucofa unyana amaqhinga asinceda ukuba sigcine ixesha xa sihlela okanye siyila kwi-Photoshop. Sinokuguqula imibala ngokukhawuleza ukuba sicinezela kwibhodibhodi yekhompyuter yethu izitshixo zomyalelo + mna, ukuba sisebenza neMac, okanye lawula + mna, ukuba sisebenza ngeWindows.
Ukuba uyithandile le posi kwaye unomdla wazi ngakumbi malunga nokutshintsha imibala kwi-Photoshop Ndikucebisa ukuba ubonisane nezi tutorials oza kufunda kuzo tshintsha umbala ongasemva womfanekiso sele sele tshintsha umbala uye kwezinye izinto, njengempahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ungayiguqula njani imibala kwi-Photoshop